Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Isniin, 31 Dec.
Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Isniin, 31 Dec.
December 31st, 2007 Comments Off Qoys 7-ruux oo ah oo isku meel madfac ku laayayXalay: Weeraro iyo dagaal baahsan oo gees Ilaa gees hadheey Muqdisho
Muqdisho (Ogaal/W/Wararka) – Dagaallo culus oo baahsan ayaa xalay ilaa shalay gelinkii danbe ka socday deegaano kala gadisan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Somaliya.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada Muqdisho waxa dagaalo ba’an oo u dhexeeya kooxaha ka soo horjeeda Dawlada Cabdilaahi Yuusuf iyo joogitaanka ciidamada taageera ayaa waxay ka kala dheceen, Isgoyska Kaasa Balbalaare ‘Wadada Tarabuunka, ‘Isbitaalka xooga, Guryaha African village. Wadada Km -4, Jidka wershadaha iyadoo sidoo kalena gantaalo lagu garaacay Madaarka Muqdisho.
Inta la ogyahay 7-qof oo isku qosys ah ayaa dagaalada Xalay fiidkii ku geeriyootay ka dib markii Madfac ku habsaday guri ay daganaayeen oo ku yaala wadadda Janaraal Daa,uud.
Dadkan shacabka ah ee gantaalkaasi guriga ay deganaayeen ugu tagay ayaa la sheegay in 5- ka mid ahi ay caruur ahaayeen iyo Hooyadood, dadkaasoo ka mid ahaa qoxooti ku noolaa guryo cooshado ka sameysan oo ku yaala xaafadda Janaraal Daa’uud ee Degmada Yaaqshid. Qoyska masiibadu ku habsatay ayaa la sheegay in Aabihii oo wakhtigaa ka maqnaa uu ka badbaaday.
Ka hor intii aan madfacu baabi’in qoyskan ayaa sida lagu faafiyay badi idaacadaha Muqdisho waxa la maqlayay madaafiic xoog leh oo la isku weydaarsanayo goobo ka, agdhaw fadhisin Ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin xarunta Wasaaaradii hore ee gaashaan dhiga’ Guul wadayaasha ‘iyo Garoonka kubada Cagta ee Muqdisho Stadium. Sida uu Idaacada Shabelle goor danbe oo xalay ahayd u sheegay afhayeenka ciidamada midawga afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho Captain Paddy Ankunda kooxo ku aad u hubeysan gaadiid weheliyo ayaa iyana weerar culus ku qaaday saldhiga ciidamada Uganda oo ku taala Agagaarka KM4 ee Xaafada Hodan magaalada Muqdisho. Sarkaalkani waxa uu sheegay inay is difaaceen hase ahaatee, ma jiraan warar madaxbanaan oo xaqiijinaya khasaaraha labada dhinaca kala gaadhay.
Weerarka lagu qaaday ciidamadda Uganda ayaa kusoo beegmay xili deegaano badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho xalay ay dagaalo ka dhaceen.
Warku wuxuu intaa ku daray in intii weerarka ciidamada Uganda lagu qaaday uu soo socday sidoo kale madaafiic lagu tuuray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dagaaladan Muqdisho xalay ku baahay ayaa loo arkaa kuwo qorshaysan oo kooxaha ka soo horjeeda ciidamada taageeraya Cabdilaahi Yuusuf ay ku muujiyeen awooda ay weli u leeyihiin inay qaadaan weeraro baahsan. Iyada oo aan ilaa hada la xaqiijin karin khasaaraha dhab ahaan dagaaladani geysteen.
Burco: Doorashada maayar xigeen cusub iyo deedafaynta Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Burco (Ogaal)- Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland, ayaa durtay, isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaantay kalfadhi aan caadi ahayn oo shalay ay isugu yimaadeen Golaha Deegaanka ee Magaalada Burco, oo ay ku doorteen Maayar ku-xigeen cusub.
Sida uu sheegay Maayarka Magaalada Maxamuud Xasan Dhego-laab, amar ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland, ayaa lagu dedafeeyay doorashada Maayar-xigeenka cusub, oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Falay. Kaas oo uu Maayarku sheegay in joojinta Doorashadaa ay Wasaaradda Arrimaha guduhu ku sababaysay, in sharcigu dhigayo marka loo eego tirada Xubnaha Golaha deegaanka Burco oo 21 ah, uu codka lagu guulaysanaa yahay 14. Halka uu Maayar xigeenkan cusub ee la joojiyey uu ku guulaystay cod dhan 13, ka dib markii uu jagada kula tartamay Maayar ku-xigeenkii hore Baashe Muuse. Halkaas oo tirada xubnaha Xildhibaanada ah eek al fadhiga lagu doortay Maayar-xigeenkan goob-joogga ka ahayd ay dhamayd 17 Xildhibaan. Isla markaana ay goob joog ka ahaayeen Guddoomiyaha Gobolka Togdheer, Taliyaha Booliska Gobolka iyo Masuuliyiin kale.
“Ma rabo in aan sheego lacagta madaxfurshada ah ee labada gabdhood” Cadde Muuse
Boosaaso (Ogaal/W.Wararka) – Kooxo budhcad ah oo afduub ku haysta laba gabdhood oo hawlo samafal ka waday Maamul Goboleedka Puntland, Islamarkaana ka shaqeynayey hay’adda MSF ayaa dalbadey madax furasho sida Wakaalada wararka ee Reuters uu shalay u sheegay hogaamiyaha maamulkaasi ee Cade Muuse.
Cadde Muuse waxa uu muujiyay in labada gabdhood oo todobaadkii hore laga afduubay magaalada Boosaaso ay ilaa hadda caafimaad ahaan wanaagsanyihiin, “Waxaan la xidhiidhney afduubayaasha. Waxana ay noo sheegeen in shaqaalaha u qafaalani ay caafimaad qabaan.”Ayuu u sheegey wakaalada Wararka ee Reuters Cadde Muuse. “Ma rabo in aan sheego lacagta madaxfurshada ah ee labada gabdhood ee ay dalbadeen afduubayaashu, laakiin waxba heli maayaan” ayaana hadalkiisa ka mid ahaa, Madaxweynaha Puntland.
Cadde Muse waxa uu caddeeyay in afduubayaasha labadan hablood qafaashay ay yihiin , kooxo hore afduub ugu qabsadey wariye Faransiis ahaa oo maalin ka hor markii labadan dumarka ah la afduubay isaga lagu soo daayay madaxfurasho gaadhaysa 100,000 oo dolar. Islamarkaana ka dhoofey Boosaaso.
Cadde Muuse waxa kale oo uu sheegay in lacagtaa madaxfurashada looga qaaday wariyaha ay isku khilaafeen kooxdii howlgalkan fuliyay, isaga oo ku dooday in sidaa ay u sheegeen xubno ay ka qabteen ciidankiisu budhcadani markii ay afduubeen labadan hablood ee u shaqaynayay Hayadda MSF.
Waxa jira warar muujinaya in Budhcadan oo loo arko shabakad isku xidhan oo aanay ka madhnay masuuliyiinta maamulkaasi ay dalbadeen lacag madaxfurasho ah oo gaadhaysa 400,000 oo doolar si ay sii daayaan labadan dumar ah.
Cadde Muuse oo dhawaan Idaacada codka Maraykanka ee VOA ka waraysatay burburka iyo nabadgelyo xumada maamulkiisa soo foodsaartay, waxa uu ku dooday in dibada lagaga soo duulay, Isaga oo isla warysiga su’aalo kale oo lagu sii weydiiyay-na ku eedeeyey Wasiirkii hore ee